Maalinta: Oktoobar 30, 2017
Mashruuca Metro wuxuu ku dari doonaa qiimaha Darica
Midowga Degmooyinka Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Magaalada Kocaeli İbrahim Karaosmanoğlu ayaa la kulmay Madaxweynaha Ururka Darica Mukhtars Aytun Er iyo mukhtars kale isaga. 35 kiiloomitir wadada [More ...]
Transist 2017 2 wuxuu bilaabmaa bisha November
Shirka 10-aad ee Caalamiga ah ee Gaadiidka Magaalada Istanbul iyo Carwada ayaa la qaban doonaa Noofembar 2-4. Shirka Gaadiidka Caalamiga ah ee Istanbul iyo Carwada (Transist 2017), 2-4 Noofambar 2017, Lutfi Kirdar Rumeli Hall [More ...]
Xawaaraha Tareenka ee Waddada Mudanya
Tareen xawaare sare leh Bursa Station ayaa laga dhisi doonaa Wadada Mudanya meesha laga soo galo Balat viaduct dhismaha ayaa dib loo bilaabay. Iyada oo loo eegayo jaranjarada dhulka, rugta ayaa laga kor qaadi doonaa dhulka dushiisa si loo dhiso lugaha lugta leh, oo ah ku-meelgaar Muddo ku-meel-gaadh ah [More ...]
4 Tirada Rakaabka Rakaabka Sanadkiiba Marmaray
Bakanı Mashruuca qarnigii ”Arslan wuxuu xasuustaa in Marmaray la hawl geliyey Oktoobar 29, 2013 inta u dhaxaysa 13-kiiloomitir Fariin ee Kalabaxa iyo Kazlıçeşme. [More ...]
Tareenka BTK wuxuu ka bilaabmaa Dan Tareenka ka yimaada London wuxuu tagi karaa Beijing
Iibsashada kirada bishii ee Istanbul ee Metro 10 Thousand Dollars
Istaanbuul, kirada dukaamada ku yaal meelaha laga soo marsado tareenka ayaa ka badan kirooyinka suuqyada raaxada ee raaxada. Kirada dukaamada ku hoos yaal Zorlu AVM ayaa ku dhow 50. In kasta oo shabakadda metro ee magaalada Istanbul ay si isdaba joog ah u sii fidayeen dhawaanahan, idaacadda [More ...]
The Republic of Turkey qaadday tallaabooyin ay ku 95'inc sanadkii la soo dhaafay. Intii lagu jiray muddadii Jamhuuriga, waddankeenu wuxuu gaadhay guulo aad muhiim u ah. Gaar ahaan 15-kii sano ee la soo dhaafay Xisbiga AK Party muddadii maal-gashiga gaadiidku ku dhammaan jireen sheeko. markab [More ...]
RayHaber 30.10.2017 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qandaraaska ee taariikhda 30.10.2017 ee nidaamkayaga.
Dowladda Hoose ee Magaalada ayaa bilaabay in ay ka shaqeyso gaadiidka dadweynaha Bahar Çamaş, oo fariistay kursiga darawalka. Çamaş wuxuu yidhi, waxaan la kulmay jawaab-celin aad u weyn rakaabkii arkay qof dumar ah oo ku fadhiya kursiga darawalka. Dumar darawal ah oo daawanaya shaqadooda [More ...]
Gaadiidka, gaadiidka xigeenka 3 iyo isgaarsiinta khubaro ah si ay u adeegaan ee ururka dhexe ee wasaaradda arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, 2 badda caawimo khabiir iyo Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) General Directorate kormeerayaasha 5 Ganacsi [More ...]
Mersin Governor Su, Maalgashiga dhismaha
Guddoomiyaha Gobolka Mersin Ali İhsan Su wuxuu eegay shaqada 'Yenice Logistics Center', 'Tareenka Xawaaraha Sare' iyo 'Çukurova Airport Airport' mashaariicda horumarka ka socda magaalada. Saldhigga Tareenka ee Mersin wuxuu ka tagayaa tareenka 'Anatolia' [More ...]
Shirkada Dahabshiil Metro 1 Waxay Bilawday Bilaha
Duqa magaalada Mevlüt Uysal, oo ka baaraandegay Mashruuca Isku-xidhka Usküdar Square xubno ka tirsan saxaafadda, ayaa sheegay in shaqada la dhameyn doono bilaha 6 iyo in qayb ka mid ah Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy oo ku socota Cakmak Stop lagu furi doono bilaha 1. [More ...]
Biriishku waxay labanlaabmeen qiimaha hantida maguuraanka ah ee kuyaala Kanaan
Hawlaha dhismaha iyo qiimaha mitirka laba-jibaaran ee Gelibolu Sütlüce iyo Lapseki Şekerkaya, oo ah halka lugaha buundadu ay ku sii kordhayaan soo jiidashada maal-gashadayaasha, ayaa la filayaa inay sii kordhaan marka la dhammaystirayo taariikhda mashruuca. Marka loo eego xogta Milliyetemlak.com, [More ...]